Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia N8 / N9
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo & Video ka Nokia N8 / N9
Nokia N8 / N9: kabsado photos tirtiray iyo files
Waxaan isku dayay sameeyo album cusub ee menu sawir ee si aan u sii fav oo dhan aan ka mid folder.
Waxaan soo guuriyeen PIC ka ALL in folder cusub album ayaa ka dibna la tirtiro isla PIC galka ALL laakiin si toos ah oo dhan PIC ee folder cusub helay tirtiray.
Sida caadiga ah in dhammaan taleefanada Nokia habkan ka shaqeeya iyada oo aan sidooda wax. Sidee baan uga tirtirayaa PIC back to my folder?
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay joojiyaan gelinaya files cusub ee aad taleefan. Kuwa sawirada tirtiray weli waxay yihiin, in kasta oo aad meel kasta iyaga oo aan ka arki kartaa. Laakiin haddii aad files cusub, ay la overwritten doonaa, oo waxay noqon doontaa soo kabashada adag. Si aad u soo ceshano photos tirtiray, video iyo maqal ah ka Nokia N9 ama N8, kaliya aad u baahan tahay Nokia N8 / N9 qalab kabashada ah, taas oo ka dhigi karaan inaad hesho files ka luntay si fudud.
Kabsado photos & videos tirtiray ka Nokia N9 / N8
Hel kabashada qalab xirfadeed: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac
Labada ka mid ah barnaamijyada soo kabashada sawir ciyaari waafaqsan fiican la Nokia N9 iyo N8. Kabashada sawir Tani waxay kaa caawin kartaa inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted ama geli photos, videos iyo gabayo fudud 3 tallaabo. Intaa waxaa dheer, waxa ay taageertaa taxanaha kale ee telefoonada Nokia.
Isku day version maxkamad free of this software kabashada Nokia N8 / N9 hadda. Soution oo dhan oo keliya qaadataa 3 tallaabo.
Step1. Connect aad Nokia N8 ama N9 in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan Nokia N8 ama N9 in kombiyuutarka la cable ah digital, ama qaataan kaadhka xusuusta oo ku xirmaan akhristaha kaarka. Markaas abuurtaan barnaamijka aad ku rakiban, oo guji "Start" button on interface ugu weyn.
Step2. Sawirka photos tirtiray, videos ka Nokia N8 / N9
Tallaabada 2 waa in ay doortaan aad Nokia phone, taas oo badanaa u muuqata sida a I. warqad drive Haddii aad rabto in aad kaliya inuu ka soo kabsado photos tirtiray ama videos, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan oo isticmaalaya "Filter Options". Markaas riix "Scan" si ay u bilaabaan.
Step3. Kabsado files Nokia N8 / N9 la mid click
Scan ka dib, dhammaan faylasha recoverable waxaa lagu soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo iyo hubiyo tayada file ee, waan ceshan kuwa aad rabto in aad ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Nokia N8 / N9 ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee soo kabsaday sawiro ka Nokia N8 / N9
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Motorola taleefanka gacanta
TIFF Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado TIFF Files
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka Virtual digsi
Sidee loo farsameeyo Corsair Flash Voyager Recovery